Hobby Farm HD Free 2019.1.130 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2019.1.130 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Hobby Farm HD Free
Hobby Farm HD Free ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Jill ရဲ့အိပ်မက်နောက်ဆုံးတော့စစ်မှန်တဲ့လာလေပြီ သူမသည်သူမ၏အလွန်ကိုယ်ပိုင်ကျွန်းပေါ်တွင်သူမ၏အလွန်ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာရှိပါတယ်။ , exotic သစ်သီးများရိတ်အခမဲ့-ပြောင်းရွှေ့တိရိစ္ဆာန်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, ဝါသနာလယ်ယာစီမံကိန်း၌လက်စက်များလည်ပတ်! ထိုတငျ့တယျနေအောက်မှာသင့်ရဲ့လယ်ယာအလုပ်လုပ်ကိုင်နှင့်သင်၏အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအခွက်နှင့်အတူကို Jill ကူညီသည်။ သင့်ရဲ့လယ်ယာများအတွက်အသစ်ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူနှင့်လာအရသာကောက်ပဲသီးနှံစောင့်ရှောက်ရမည်။
- play 100 အဆင့်ဆင့်
- လွယ်ကူသောကစားသည်အပန်းဖြေဂိမ်း mode ကို
- 35 အောင်မြင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့ကိုရှာပါ - Facebook.com/Alias​​worlds
ကျွန်တော်တို့ကို Watch - Youtube.com/Alias​​worlds
ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု - Alias​​world.com
Hobby Farm HD Free အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Hobby Farm HD Free အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Hobby Farm HD Free အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Hobby Farm HD Free အား အခ်က္ျပပါ
jogoseaplicativosdiversos စတိုး 110 182.22k
Hobby Farm HD Free ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Hobby Farm HD Free အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2019.1.130
ထုတ်လုပ်သူ Primerose Solutions LLP
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://aliasworlds.com/about/privacy.php
App Name: Hobby Farm HD Free
File Size: 135.56MB
Release date: 2019-07-11 00:26:45
လက်မှတ် SHA1: D7:C8:83:50:43:A4:5D:4E:29:F6:F2:A5:4F:4E:B0:EF:D1:59:D8:08
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Gennady Filazopovich
အဖွဲ့အစည်း (O): Primerose Solutions LLP
နယ်မြေ (L): ~
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): ~
Hobby Farm HD Free APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ